Bit By Bit - Kubvunza mibvunzo - Activities
[ , ] Muchitsauko, ndakanga zvakanaka chaizvo pamusoro post-stratification. Zvisinei, haugari kuvandudza inofungidzirwa. Kuvaka ezvinhu anogona kuposita-stratification apo vanogona kuchiderera unhu inofungidzirwa. (Nokuti nepanomboratidza, ona Thomsen (1973) ).
[ , , ] Design uye kuitisa asiri fungidziro ongororo pamusoro Amazon MTurk kuti abvunze pfuti uridzi ( "Iwe, kana anoita munhu mumba mako, watenga pfuti, pfuti kana chivhorovhoro? Is kuti iwe kana kuti mumwe munhu ari mumhuri yenyu?") Uye mafungiro vakananga pfuti kuzvidzora ( "Unofunga kukosha-kudzivirira kodzero vokuAmerica neImba pfuti, kana kuti kudzora pfuti muridzi?").
anoita ongororo yako tora rinhiko? anoita yaiita sei zvikuru? Sei Demographics pakati mharidzo yako enzanisa kuti Demographics weU.S. vemo?
Chii yakatsvuka yera pfuti varidzi uchishandisa mharidzo yako?
Rairira nokuti asiri representativeness pamusoro mharidzo yako uchishandisa post-stratification kana dzimwe nzira. Zvino chii ndiye yera pfuti muridzi?
Sei inofungidzirwa venyu enzanisa ichangobva kufungidzira kubva bhenji Research Center? Unofunga kutsanangura kusabvumirana, kana paine?
Dzokorora nechiitwa 2-5 maitiro akananga pfuti masimba. wenyu Zvakawanikwa vakasiyana sei?
[ , , ] Goel uye nevamwe (2016) raitongwa pokuongorora asiri fungidziro-kwakavakirwa rinoumbwa 49 mibvunzo akawanda-yakasarurwa attitudinal yakavhomorwa kubva General Social Survey (GSS) uye vakasarudzwa kuongorora kubudikidza bhenji Research Center on Amazon MTurk. Vakabva kuchinja nokuda asiri representativeness pamusoro mashoko vachishandisa muenzaniso-yakavakirwa post-stratification (Mr. P), uye enzanisa kugadziridzwa inofungidzirwa nevaya vanofungidzirwa vachishandisa fungidziro-kwakavakirwa GSS / bhenji kuongorora. Itisa chete ongororo pamusoro MTurk uye kuedza kutevedzera Figure 2a uye Figure 2b nokuenzanisa kwako akagadziridzwa nokufungidzira pamwe kufungidzira kubva kupfuura zvichangobva dzinenge GSS / bhenji (Ona Appendikisi Table A2 kuti mazita 49 mibvunzo).
Enzanisa migumisiro dzako unobva bhenji uye GSS.
Enzanisa migumisiro dzako zvawanikwa kubva MTurk ongororo iri Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
[ , , ] Nezvidzidzo vakawanda vanoshandisa kuzviremekedza mushumo zviyero nharembozha basa Data. Uyu inonakidza ezvinhu apo vatsvakurudzi vanogona kuenzanisa hwokuzvidzora kushumwa maitiro pamwe Logged maitiro (ona semuenzaniso, Boase and Ling (2013) ). Two maitiro kujairwa abvunze vari kudana uye mameseji, uye vaviri nevakawanda nguva mapuranga vari "zuro" uye "kare vhiki."
Usati vaiunganidza chero data, izvo zviri vaizviona mushumo matanho Unofunga rakanyatsorurama? Sei?
Rokutsvaka 5 shamwari dzako kuti ongororo yako. Ndapota muchidimbu pfupisa sei 5 Shamwari aya vakatora. Izvi zvingava zvakabudiswa pakuvhiya kunyengedza chaiwo vakanga vaine kwavakarerekera mune inofungidzirwa dzenyu?
Tapota bvunza navo inotevera Micro-ongororo:
"Kangani iwe akashandisa runharembozha kudana vamwe nezuro?"
"Rugwaro sei mashoko mazhinji akaita kutumira nezuro?"
"Kangani iwe akashandisa rako nharembozha kudana vamwe mumazuva okupedzisira manomwe?"
"Kangani akaita aunoita serura kutumira kana mameseji / SMS mumazuva okupedzisira manomwe?" Kana Ongororo zvakakwana, kumbira kuti aone ravo nechibhende Data sezvo Logged avo runhare kana basa Provider.
Sei kuzvidzora mushumo kushandiswa enzanisa kuti danda mashoko? Ndezvipiko yakanyatsorurama, chidukusa yakarurama?
Zvino nokubatanidza mashoko kuti iwe ndaitora pamwe mashoko kubva vamwe vanhu vari mukirasi mako (kana muri kuita basa iri kuti kirasi). With ichi dataset hombe, kudzokorora chikamu (d).
[ , ] Schuman uye nemuti (1996) nharo kuti mirairo mubvunzo dai basa nokuti mifananidzo maviri ukama pakati mibvunzo: mibvunzo chikamu-chikamu umo mibvunzo miviri vari chete pamwero specificity (semuenzaniso ratings vaviri musarudzo dzemutungamiriri wenyika); uye mibvunzo chikamu-yose apo wemauto mubvunzo anotevera mubvunzo chaiwo (eg vachikumbira "sei kugutsikana Uri nebasa rako?" ichiteverwa "sei kugutsikana Uri noupenyu hwako?").
Ivo zvakare unhu nezvemarudzi maviri mubvunzo kuti kushanda: kusachinja-chinja zvinokonzerwa kuitika apo mhinduro mubvunzo kwapera vanounzwa pedyo (kupfuura vaizova zvikasadaro kuva) vaya vakapiwa akamborasiswa mubvunzo; siyanisa Migumisiro kuitika kana paine mukuru misiyano pakati mhinduro dzemibvunzo miviri.
Gadzira peya mibvunzo chikamu-chikamu zvamunomufunga achava guru mubvunzo kuti zvazviri, vachipiwa mibvunzo chikamu-wose kuti unofunga achava guru kurongeka mugumisiro, uye mumwe peya mibvunzo vane hurongwa unofunga haana basa. Mhanyai imwe ongororo kuedza musi MTurk kuedza mibvunzo yenyu.
yakakura sei chanza-chikamu mugumisiro chamakwanisa kusika? Yaingova chimwe kusachinja-chinja kana musiyano maturo?
yakakura sei chanza-yose mugumisiro chamakwanisa kusika? Yaingova chimwe kusachinja-chinja kana musiyano maturo?
Pakanga pane mubvunzo kuti anoitwa peya rako kupi hauna kufunga hurongwa vaizoita basa?
[ , ] Kuvakira basa Schuman uye nemuti, Moore (2002) rinorondedzera yoga tinosiyana mubvunzo kuti kushanda: chirungiso uye subtractive. Nepo Kusiyana uye kusachinja-chinja zvinokonzerwa anogadzirwa sezvo migumisiro vakabvunzwa 'Mutengo vaviri zvinhu pachinhu mumwe, chirungiso uye subtractive zvinokonzerwa anogadzirwa apo vakabvunzwa dzinoitwa unetseke kuti hombe asingaputsi mukati iyo mibvunzo yakabvunzwa. Read Moore (2002) , ipapo kugadzira kumhanya pokuongorora kuedza musi MTurk kuratidza chirungiso kana subtractive nemigumisiro.
[ , ] Christopher Antoun uye nevamwe (2015) vaidzidza kuenzanisa nyore ivhu vakawana kubva ina dzakasiyana paIndaneti arirwise manyuko: MTurk, Craigslist, Google AdWords uye Facebook. Vagoronga nyore kuongorora uye rokutsvaka vechikamu kuburikidza dzinenge mbiri dzakasiyana paIndaneti arirwise manyuko (vanogona kuva zvinyorwa zvakasiyana panonyuka mana yaishandiswa Antoun et al. (2015) ).
Enzanisa mutengo pa pinza, tichitarisa mari uye nguva, pakati zvinyorwa zvakasiyana-siyana.
Enzanisa Kuronga ivhu vakawana hwatingawana akasiyana.
Enzanisa kunaka mashoko pakati ivhu. Nokuti pfungwa sei kuyera date unhu kubva vakabvunzwa, ona Schober et al. (2015) .
Chii rako nzvimbo kupi? Sei?
[ ] YouGov, paIndaneti-inobva tsvakurudzo musika yakasimba, inoitwa paIndaneti sokudaro ane eDare vanenge 800,000 vakabvunzurudzwa muUK uye akashandisa Mr. P. kufanotaura mugumisiro EU referendamu (kureva, Brexit) apo UK vavhoti kuvhota kana kuramba mukati kana kusiya European Union.
A tsananguro yakatodzama YouGov kwakaita uwandu womuenzaniso pano (https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/). Nehasha kutaura, YouGov partitions vavhoti mukati mhando kwakavakirwa 2015 talk sarudzo sarudzo sarudzo, zera, zvinodiwa, munhurume, gore hurukuro, uyewo constituency yavanogara. Chokutanga, vakashandisa mashoko inounganidzwa kubva YouGov panelists kufungidzira, pakati pevaya uyo kuvhota, kuwanda kwevanhu mumwe voter mhando uyo kuda kuvhota Leave. Ivo vanofungidzira turnout neimwe voter mhando nokushandisa 2015 British Election Study (BES) post-sarudzo chiso nechiso ongororo, izvo zvakapupurira turnout kubva nesarudzo mabhanzi. Pakupedzisira, ivo vanofungidzira kuti vanhu vangani varipo mumwe voter mhando ari electorate yakavakirwa azvino Census uye Annual Population Survey (nevamwe Kuwedzera ruzivo kubva BES, YouGov ongororo Data pasi rwevanhu musarudzo, uye ruzivo pamusoro sei vanhu vazhinji akavhotera bato rimwe nerimwe constituency).
Mazuva matatu asati sarudzo, YouGov yakaratidza mbiri nguva kutungamirira nokuda Leave. Pausiku kuvhota, nomumwe akaratidza zvakare pedyo kudana (49-51 Ramba). Chokupedzisira pamusoro-the-zuva kudzidza vakafanotaura 48/52 vachida Ramba (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Kutaura zvazviri, kufungidzira uku akarasikirwa kwokupedzisira mugumisiro (52-48 Leave) mana kubva muzana pfungwa.
Shandisa zvachose ongororo kukanganisa framework zvakurukurwa muchitsauko chino kuongorora chii chashata.
YouGov akatii pashure musarudzo (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/) akatsanangura: "Izvi zvinoita sokuti vari chikamu chikuru nokuda turnout - chinhu kuti isu zvataurwa zvaizova pakugara migumisiro yakadaro dzakarukwa zvakanaka nepakati nhangemutange. turnout yedu womuenzaniso waibva, muchidimbu, musi kana vakabvunzwa vakanga zvokusarudzwa pakupedzisira vakawanda sarudzo uye turnout pamwero kupfuura zvavo sarudzo nganisa wokuenzanisira, kunyanya North. "Izvi kuchinja mhinduro yako chikamu (a)?
[ , ] Nyora simulation kuenzanisira mumwe nomumwe mufananidzo kumbokanganisawo Figure 3.1.
Gadzira mamiriro ezvinhu apo zvikanganiso izvi chaizvoizvo kudzima.
Gadzira ezvinhu apo zvikanganiso vabve vanzwa mumwe.
[ , ] Ongororo pamusoro Blumenstock uye nevamwe (2015) zvaisanganisira kuvaka muchina pakudzidza womuenzaniso kuti aigona kushandisa digitaalinen zvisaririra Data kufanotaura ongororo mhinduro. Zvino, muri kuenda kuedza zvimwechete ane zvakasiyana dataset. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) vakawana kuti Facebook anofarira anogona kufanotaura mumwe unhu uye unhu hwake. Zvinoshamisa, uprofita izvi zvinogona kunyanya yakarurama kupfuura shamwari uye nevamwe (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .
Verenga Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , uye kutevedzera Figure 2. mashoko avo zvinowanikwa pano: http://mypersonality.org/
Zvino, kutevedzera Figure 3.
Pakupedzisira, edza muenzaniso wavo uri woga Facebook date: http://applymagicsauce.com/. Sei zvakanaka sei kushanda kwauri?
[ ] Toole et al. (2015) Kushandisa runhare yksityiskohta zvinyorwa (CDRs) kubva dzeserura kufanotaura uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa. urovha kuitika.
Enzanisa magadzirirwe Toole et al. (2015) pamwe Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
Munofunga CDRs vanofanira kutsiva chinyakare kuongorora, mukwanisi navo kana kwete kushandiswa pane zvose kuti hurumende vaumbi vemitemo kuti chamber urovha? Sei?
Uchapupu hupi chaizoita ubvume kuti CDRs unogona kutsiva zvachose tsika zviyero ari urovha mwero?